ဦးသိန်းညွန့် လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းပြောကြားမူအပေါ် ဖြေရှင်းချက် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဦးသိန်းညွန့် လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းပြောကြားမူအပေါ် ဖြေရှင်းချက်
Saturday, July 21, 2012 ရိုဟင်ဂျာသတင်း, ရိုဟင်ဂျာ
ရက်စွဲ။ ။၁၈ ရက်၊ဇူလိုင်လ၊၂၀၁၂ ခုနှစ်။
နှစ်ပေါင်း(၂ဝ) ကျော် NLD ပါတီဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အာဏာရှင်စနစ်၊ အာဏာရှင်ဥပဒေ၊ အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ကိုင်တွယ်ပုံများကို ဝေဖန်ရှုံချ၊ အတိုက် အခံပြုခဲ့သဖြင့် လူကြီးမင်းကို လေးစားလောက်သော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်းအဖြစ် ပြည်သူက ရှုမြင်ခဲ့သည်၊၊
သို့သော် လူကြီးမင်းသည် တိုင်းပြည်တွင်းစနစ်နှင့် တရားဥပဒေများ ပြောင်းလဲရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးတို့ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်ပေါ်အသက်ဝင်လာရေးကို အလေးမထားဘဲ ရာထူးရရှိ ရေး၊ လွှတ်တော် အမတ်ဖြစ်နုိုင်ရေးကို ဦးစားပေးလျှက် NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ ခွဲထွက်ကာ ပါတီသစ်ထူထောင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်၊၊ ယခင်ရရှိ ခဲ့သော ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဟူသည့်သိက္ခာကို သကန်းကျွန်းမြီု့နယ် က ပြည်သူများကို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့သည်၊၊ လူကြီးမင်းအားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ထောက်ခံခဲ့၍ လွှတ်တော်အမတ် ဖြစ်နေပါသည်။ ယခုလွှတ်တော်တွင်း ဒီမိုကရေစီ ဆန့်ကျင်သော ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးကို ပြက်ရယ်ပြုသော အသုံးအနှုန်းဖြင့် ဆွေးနွေးနေသည်ဟု ကြားသိရပါသည်။
နိုင်ငံသားအရေးဆောင်ရွက်ရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးဟုဆိုကာ ကဗျာမဆန်သင့်ဟု ယခုစတုတ္တအကြိမ် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်ကို အရေးစိုက်ရန်မလိုဟု ဆိုလိုခြင်းလော့။ ယခင် NLD ပါတီမှာရှိစဉ်က ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ခြင်းမှာ NLD တွင် ရာထူးရရှိရေးအတွက် ဟန်ဆောင် ကြွေးကြော်ခြင်းလော့။
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်အတု၊ မမှန်မကန်များ၊ ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ဖို့လိုပါတယ်ဟု လွှတ်တော်အတွင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်သည် ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေသစ်အရ ပေါ်ထွက်လာသော ကဒ်ပြားဖြစ်သည်။ ဤတွင် ဦးသိန်းညွန့်က အာဏာရှင်စနစ်အတွင်း ၁၉၈၂ ခုနှစ်ပြ ခဲ့သော နိုင်ငံသား ဥပဒေသစ်ကို မှန်ကန်မျှတသည့် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဥပဒေဟုဆိုလိုခြင်းလော့။ ထိုဥပဒေမှန်ကန်လျှင် အာဏာရှင်ခေတ်က တခြားဥပဒေများလည်း မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆရပေမည်။ ထိုသို့ဥပဒေရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး မှန်ကန်သည်ဟု ဦးသိန်းညွန့်က သတ်မှတ်သည်ဆိုလျှင် ယခင်က ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမှာ မှားယွင်းပါသည်ဟုဝန်ခံတောင်းပန်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည်။
ထို့အပြင် ကိုလိုနီခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်က နှစ်ကြိမ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တယ်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူးဟု လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေးရာ၌ ပြောဆိုသွားသည်။ ပထမအချက်မှာ အင်္ဂလိပ်ခေတ် သန်းခေါင်းစာရင်း နှစ်ကြိမ်မက ဆယ်နှစ်တစ်ကြိမ်၊ ရှစ်ကြိမ်အထိ ကောက်ခံခဲ့သည်။ ဒုတိယအချက်ကား ထိုသန်းခေါင်း စာရင်းများတွင် ယနေ့တိုင်းရင်းသား(၁၃၅) မျိုးဟု ဆိုသော လူမျိုးစုများအားလုံး အမည်နာမ များမရှိခဲ့သည်ကို အဘယ်ကြောင့်ထုတ်ဖေါ်မပြောခဲ့သနည်း။ ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေ ဟုပြဋ္ဌါန်းခဲ့သည်ကို ဦးသိန်းညွန့်ကရှေ့နေတစ်ယောက်အနေဖြင့် သိရှိမည်ဟုထင်ပါသည်။ ထိုဥပဒေ အောက်မှာ သန်းခေါင်စာရင်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ဟု ထွက်ရှိခဲ့သည်။
၄င်းစာအုပ် သန်းခေါင်စာရင်းတွင်စာရင်းမှတ်ယူရန်အတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများနှင့် နိုင်ငံခြားသား လူမျီုးစုဟူ ခွဲခြားဖော်ပြသတ်မှတ်ခဲ့ရာ၊ နိုင်ငံခြားသားစာရင်းဝင် လူမျိုးတစ်ချီု့ ယနေ့တိုင်းရင်းသား (၁၃၅)မျိုးထဲတွင် မည်သို့ပါလာသည်ကို ဦးသိန်းညွန့်က ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲ ရိုဟင်ဂျာကို နိုင်ငံခြား သားဟု အဘယ်ကြောင့် ပြောလိုပါသနည်း။
တလိုင်းသည်မွန်၊ ကောသူလေသည် ကရင်၊ ကရင်နီသည် ကယား၊ တောင်သူသည် ပအိုဝ့်၊ အီကောသည် အာခါ၊ ရှမ်းတရုတ်သည်ကိုးကန့်၊ လဝသည်လွယ်လ စသည်ဖြင့်လက်ရှိ လူမျိုးနာမည်များပြောင်းလဲ ခံယူနိုင်လျှင် အင်္ဂလိပ်သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ရခိုင်မူစလင်၊ရခိုင်မိုဟမ္မဒင်ဟူ ပါရှိခဲ့သောလူမျိုးသည် ရိုဟင်ဂျာဟု ဖြစ်လာခြင်းကို ပညာရှိ ဦးသိန်းညွန့် အဘယ်ကြောင့်ကန့်ကွက်နေရပါသနည်း။ မူဆလင်နှင့်တွဲ လူမျိုး တစ်မျိုး လက်မခံနိုင်ဟု ဦးသိန်းညွန့်တို့က မူဝါဒချမှတ်လာသဖြင့်မူဆလင်တွဲမပါသော ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး မူရင်း နာမည် ကို ဖော်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာသည် ရှေးဟောင်းရခိုင်မှ မူဆလင်များ နာမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ၁၇၊၁၈ ရာစုနှစ်များမှာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော ကိုယ်တွေ့မျက်မြင်မှတ်တမ်းစာအုပ်များကို ဦးသိန်းညွန့် လေ့လာနိုင်ရန်အောက်တွင်ရည်ညွန်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။
1.A study of languages spoken in Burma Empire by Francis Buchnan 1798
2.Classical Journal for (September and December) 1811,Vol.IV.(London)
3.Grammaticae, Lexica,collection vocabuclorum(1815,Berlin)
4.An Account of Arakan by Major R.E Robert June, 1777(Chittagong)
အထက်ပါစာအုပ်များကို လေ့လာလျှင် လွှတ်တော်အမတ်မင်း ဦးသိန်းညွန်း ကရိုဟင်ဂျာသည် ယခုပေါ်လာသော နာမည်သစ်မဟုတ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှေးပဝေသဏီကပင် မူဆလင်များကို ခေါ်ဝေါ်သော နာမည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောပေါက်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် ထို ရိုဟင်ဂျာသည် ရခိုင်ပြည်နယ် လူဦးရေစုစုပေါင်း တစ်ဝက်ထက်ပိုခဲ့ကြောင်းကိုလည်း
သိရှိသွားပြီး၊ လာမည့်လွတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဆွေးနွေးလာလျှင် အမှားပြောမိသည်ကို ပြင်ဆင်ပြီး၊ သမိုင်းမှတ်တမ်းမှာ ပါရှိသည့် အမှန်အတိုင်း တင်ပြဆွေးနွေး ပါမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်းဟူသည် အမှန်ပေါ် ရပ်တည်ပြီး၊ အမှားပြောမိခဲ့လျှင် ဝန်ခံနိုင်သော သတ္တိရှိရမည်။ သို့မဟုတ်ပါက လူလိမ်၊အတ္တကိုယ်ကျိုးသမား၊ ရာထူးအာဏာ မက်သော သူသာဖြစ်ပေမည်။
ဦးသိန်းညွန့်ခင်ဗျား၊ စာတမ်းလေးကိုသည်းခံပြီး ဖတ်ရှုနိုင်သောသတ္တိမွေးပါမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
This entry was posted on February 16, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာ ကင်တာနား၏ ရခိုင်အရေးပြောဆိုချက်၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေပြင်ဆင်ရန် လွှတ်တော်သို့ ကုလသံတမန် တိုက်တွန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စ သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးစု ၂ စုတို့ ညှိနှိုင်းအဖြေ ရှာရမည်ဟု ကင်တားနားပြော →